Xasan Sheekh oo ka digay Wareegto sharci-darro ah oo Maanta kasoo baxday Farmaajo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xasan Sheekh oo ka digay Wareegto sharci-darro ah oo Maanta kasoo baxday Farmaajo
Ardaan Yare 24 December 2020
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sharci darro iyo keli-tasnimo hor loogu socday ku tilmaamay wareegto uu maanta soo saray madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo ku saabsan Dastuurka dalka.
Xasan Sheekh oo Shir jaraa’id oo u qabtay ayuu ku shaaciyey in wareegtada uu wax ka bedelka Asnixinta Dastuurka dib ugu dhigay ay tahay shrci darro aan haba yaraatee lahayn wax sharciyad ah, wuxuuna ugu baaqaya inuu dib uga laabto arrintan oo ah shaqo ay leeyihiin labada aqal ee Baarlamaanka.
“Waxa uu maanta sameeyay Madaxweynaha waxay ka dhian ahay inuu Dastuurka laalay. Shaqooyinka Madaxweynaha xafiiskiisa shaqooyinka ka bilaaban karo waa xadidan yihiin, shaqada ugu weyn xafiiska ka bilaabata waa magacaabida Ra’iisul Wasaaraha.. madaxweynaha xaq uma lahan sharci uma lahan inuu meeshaas ka bilaabo howsha dastuurka wax looga qabanayo dastuurka ayaa qoraya, waana sida tilmaaman in labada aqal oo baarlamaanka oo kulma oo qaraar ka soo baxo, qaraarkaas intuu aqbalo Madaxweynaha, kadibna ayuu digreeto ka soo saaro” ayuu yiri Xasan Sheekh oo ka digay dariiqa Dastuur ku tumashada h ee uu waaay Farmaajo.
Wuxuu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ka hor yimid inay shiraan laabda aqal ee Baarlamaanka, kadibna uu isagii qaatay shaqadii ay lahaayeen, taasoo uu ku tilmaamay mid aan la qabali karin, wuxuuna Guddoonka labada Gole iyo xildhibaannada ugu baaqay inay mas’uuliyadooda qaataan.
Hadalkan Xasan Sheekh ayaa kusoo aadaya, iyadoo Maanta Farmaajo uu xeer Madaxweyne dib ugu dhigay wax ka bededelka Dastuurka, maadaama la galay xilligii doorashooyinka dalka oo ay sii dhammaaneyso muddada xilhaynta Barlamaanka 10aad, ayna bilaabanayso muddo Xileedka Barlamaanka 11aad ee Federaalka Soomaaliya.
Faylka Madow ee Madaxweyne Farmaajo oo ka shaqeynaya in Jubbaland la duqeeyo
Golaha Wasiirada oo ka shiray amniga Doorashooyinka, xili uu jiro muran